जीवनका लागी निताको चाहना, ‘धुन’ मा यसरी पोखिन मनका भावना ! (भिडियो) « Mazzako Online
जीवनका लागी निताको चाहना, ‘धुन’ मा यसरी पोखिन मनका भावना ! (भिडियो)
युवा निर्देशक कृष्ण पौडेलको डेब्यु निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘धुन’ को अफिसियल गीत रिलिज गरिएको छ । मंगलवार सार्वजनिक सिनेमाको ‘केहि पल’ बोलको गीतमा अभिनेता जीवन लुईंटेल र अभीनेत्री नीता ढुङ्गाना फिचरिङमा छन् ।
देशमा सार्क सम्मेलनले राजनितिक माहोल तताईरहेको समयमा सांगितिक माहोल तताउनको लागी यो गीतले भुमिका खेल्नेमा निर्माण युनिट आशावादी छ । सिनेमा सांगितिक प्रेम कथामा आधारित छ । यो सिनेमाकी प्रस्तुतकर्ता मालती शाह हुन भने लगानी सुशिल शाह, श्रेया दुलाल, मधुसुदन भट्टराई र विनोद भट्टको रहेको छ ।
तारा सितारा प्रोडक्शनको ब्यानरमा तयार सिनेमा ‘धुन’मा जीवन र नीतासँगै मुकेश ढकाल, श्रेया दुलाल, उमावेवी, रमेश बुढाथोकी, सुरविर पण्डित, विकल्प शाह लगायतको अभिनय छ । । केही दिनअघि फस्टलुक सार्वजनिक गर्दै यो फिल्म रिलिज मिती चैत्र ०६ लाई तोकिएको छ ।